Football Khabar » बार्सिलोनाका अध्यक्षद्वारा प्रशिक्षकको बचाउ, खेलाडीमाथि थोपरे दोष !
बार्सिलोनाका अध्यक्षद्वारा प्रशिक्षकको बचाउ, खेलाडीमाथि थोपरे दोष !
स्पेनिस बार्सिलोनाका अध्यक्ष जोसेप मारिया बार्टोमेउले आफ्ना प्रशिक्षक अर्नेस्टो भाल्भर्डेको बचाउ गरेका छन् । बार्सिलोना गत राति कोपा डेल रे फुटबलमा भ्यालेन्सियासँग हारेर उपाधि गुमाएपछि बार्सिलोनाका खेलाडी र प्रशिक्षकको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
रियल बेटिसको घरमा भएको खेल हेर्न बार्सिलोनाका अध्यक्ष बार्टोमेउ पनि रंगशाला पुगेका थिए । केही समयअघि मात्रै युरोपियन च्याम्पियन्स लिगबाट आउट भएको बार्सिलोना कोपा जितेर केही राहत लिन चाहन्थ्यो । तर, उसको सपना भयालेन्सियाले चकनाचुर पारिदियो ।
सो खेलपछि खास गरी प्रशिक्षक भाल्डर्भेको चर्को आलोचना भएको छ । फ्यानहरूको ठूलो हिस्साले भाल्भर्डेलाई प्रशिक्षबबाट हउाटनुपर्ने माग गरेका छन् ।
तर, क्लबका अध्यक्षले बार्टोमेउले भने कोपाको उपाधि प्रशिक्षकको गल्तीले नगुमाएको बताउँदै खेलाडीमाथि दोष थोपरे । ‘यो खेल प्रशिक्षकको गल्ती–कमजोरीले हारेका होइनौं,’ उनले भने, ‘टिममा केही परिवर्तन भएको थियो । र, हाम्रा खेलाडीले गोल गर्न सकेनन् ।’
बार्टोमेउले भाल्भर्डे अर्को सिजन पनि प्रशिक्षक रहने बताए । ‘भाल्भर्डेसँग अझै सम्झौता छ । र, उनी टिमका प्रशिक्षक रहनेछन्,’ बार्टोमेउले थपे ।
बार्टोमेउले दुई उपाधि हारे पनि आफूहरूको सिजन राम्रो भएको बताए । ‘दुई प्रमुख उपाधि गुमायौं । तर, यो सिजन खराब हुन सक्दैन । किनभने, हामीले महत्त्वपूर्ण ला लिगा जित्यौं,’ बार्टोमेउले भने ।
प्रकाशित मिति १२ जेष्ठ २०७६, आईतवार ११:०७